မင်္ဂလာပါဆရာ သက်ရှည်ကျန်းမာပျော်ရွင်ပါစေရှင့်။ လိုင်းကမကောင်းတော့ဘာမှမမြင်ရသေးဘူး။ သမီးခံစားနေရတဲ့ဝေဒနာက စိုးရိမ်ရပါလား။ သမီးကကွက်ခိုင်ကပါရှင့်။ ဟိုနေ့ကတိုက်ပွဲကြားပြေးနေရတာ မပြေးနိုင်ပဲ ဖြစ်နေပါတယ်။ အလာကားနေရင်း နှလုံးခုန်နူန်းက 20 နဲ့ 30 ထိကျနေတတ်တယ်ရှင့်။ မှတ်ဥာဏ်လဲမကောင်းတော့ဘူး။ စိုးရိမ်ရပါလာရှင့်။ ဖြစ်နေတာ လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကပါ။ အမောဆိုက်တတ်တာက လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ကပါ
တိုက်ပွဲတွေအတွက် ဆောရီး။ နှလုံးခုန်နှုန်းက သေချာပါသလား။ ပုံမှန် တမိနစ်မှာ ၇ဝ ကနေ ၈ဝ ရှိတယ်။ ပြေားရ လွှားရရင် ပိုမြန်မယ်။ တမိနစ်မှာ ၉ဝ-၁ဝဝ ဖြစ်နိုင်တယ်။ နှလုံးခုန်နှုန်း စမ်းတိုင်း ၆ဝ အောက်ရောက်နေရင် ဟဒ်ဘလော့ ဖြစ်နေမလား စစ်ရမယ်။
1. ပဌမသံဟာ ထရွိုင်-ကပ်စ်ပစ်-ဗာ့လ်ဖ် နဲ့ မိုင်ထရွယ်-ဗာ့လ်ဖ်တွေ ပိတ်တဲ့ အသံနဲ့ အဲဒီအချိန်မှာ ဖြစ်လာနတဲ့ သွေးလှိုင်းတွေကြောင့် ဖြစ်တယ်။
2. ဒုတိယသံဟာ ပါလ်မိုနရီ-ဗာ့လ်ဖ်နဲ့ အေယိုးတစ်-ဗာ့လ်ဖ်တွေ ပိတ်တဲ့ အသံနဲ့ အဲဒီအချိန်မှာ ဖြစ်လာနတဲ့ သွေးလှိုင်းတွေကြောင့် ဖြစ်တယ်။
Pulse ဆိုတာ ရူပဗေဒ နဲ့ ရုက္ခဗေဒမှာတော့ တမျိုးစီ ခေါ်ကြတယ်။ ဆေးပညာမှာ Pulse Rates ပါ့လ်စ်-ရိတ်ဆိုတာ လက်ကောက်ဝတ် လက်မအထက်နားမှာစမ်းတဲ့ သွေးခုန်နှုန်းကို ခေါ်တယ်။ အမှန်က နှလုံးခုန်တာကို အလွယ်စမ်းတာ ဖြစ်တယ်။ တခြားနေရာတွေမှာလဲ စမ်းလို့ရပါတယ်။ ဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်တွေမှာတော့ လည်ပင်းစမ်းပြတတ်တယ်။
နှလုံးခုန် မြန်တာကို Tachycardia ခေါ်တယ်။ နှလုံးခုန် နှေးတာကို Bradycardia ခေါ်ပြီး နှလုံးခုန်မမှန်ရင် Arrhythmias လို့ ခေါ်တယ်။
ကိုယ်ခန္ဓာမှာ လျှပ်စစ်စနစ် နဲ့ လျှပ်စစ်ကို သုံးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ စပါယ်ရှယ် ဆဲလ်တွေ ရှိနေလို့ပါ။ ပေ့စ်-မိတ်ကာ-ဆဲလ် တွေဆိုတာ နှလုံးထဲမှာ ရှိသေးတယ်။ လျှပ်စစ် အင်မ်ပါ့လ်စ်ကြောင့် နှလုံးကြွက်သားတွေ ညှစ်စေတယ်။ မွေးရာပါ ပေ့စ်-မိတ်ကာ-ဆဲလ် ကို စိုင်နိုအေရီရယ်-နုတ်လို့ ခေါ်တယ်။ ညာ-အထက်ခန်းမှာ ရှိတယ်။ သူ့ကို မဒူလာ အော်ဘလောင်ဂေတာ ခေါ် ဦးနှောက်ရဲ့ အစိတ်အပိုင်း တခုက ထိန်းပေးနေတယ်။
စိုင်နိုအေရီရယ်-နုတ် ကနေ စပါယ်ရှယ်-ဖိုင်ဗာအာရုံကြောတွေ ဖြာထွက်နေတယ်။ အပေါ်ခန်းတွေမှာရှိတဲ့ ဖိုင်ဗာတွေကနေ အပေါ်နှစ်ခန်းလုံးကို တပြိုင်ထဲ ညှစ်စေတယ်။ ဝ့၎ စက္ကန့်သာ ကြာတယ်။ နှလုံး အောက်ခမ်းတွေကို သွားတဲ့ စပါယ်ရှယ်-ဖိုင်ဗာကို ဘန်ဒယ်လ်-အော့ဖ်-ဟစ်လို့ နာမယ်ပေးထားတယ်။ သူကနေ ဆက် ဖျာထွက်တာတွေကို Purkinje fibers ပါကင်ဂျီ-ဖိုင်ဗာလို့ ခေါ်ပြန်တယ်။
တမိနစ် = 72 ကြိမ်
တနေ့ = 103,680
တနှစ် = 37,843,200
အသက် ၂ဝ = 756,864,000
အသက် ၄ဝ = 1,513,728,000 ကြိမ်ခုန်တယ်။